WordPress: maviri SEO plugins eMeta Tag Kugadzira | Martech Zone
WordPress: maviri SEO plugins eMeta Tag Kugadzira
Chitatu, July 4, 2007 China, Kurume 31, 2016 Douglas Karr
Ini ndanyora maviri maviri akasiyana ekuvandudza yako saiti meta tag, mazwi akakosha uye rondedzero. Mazwi akakosha anonyatso kubatsira mune yako saiti kuwanikwa, asi tsananguro dzinobatsira injini dzekutsvaga kutsvaga kuburikidza nekupa tsananguro iri nani.
Panzvimbo pekuronga izvi zvakagadziridzwa sezvandakakurudzira, kune akati wandei plugins anogona kukuitira basa racho.
With the Yoast SEO plugin iwe yaunogona kudzora kuti ndeapi mapeji anoratidzwa neGoogle mune ayo ekutsvaga mitsva uye ndeapi mapeji ayo yaisingaratidze. Yoast haingokubatsire iwe kugadzirisa iyo meta tsananguro, zvakare inokupa iwe mhinduro pane yako kiyi yekushandisa mashandisirwo uye yakanaka preview yekuti peji rako raizotarisa sei mune Yekutsvaga Injini peji peji.
Yoast inopawo sarudzo ye Premium Wedzera-On SEO plugins kuti ini ndinokurudzira zvikuru futi.
John Chow yakakurudzira iyo Zvese mune Imwe SEO Pack Plugin asi handina kumbobvira ndanyatso tarisa plugin kusvika nezuro husiku. Kunyara kwandiri. Iyo plugin inoita basa rinonakidza pakushandisa yako "Optional Excerpt" muWordPress sekutsanangurwa kwako peji rimwe chete.
Heano maitiro ekutsvaga kweinjini yekutsvaga (iwe unogona kubaya pamufananidzo kuti uone iyo chaiyo posvo):
Izvo zvakati, iyo Yese mune Imwe SEO Pack inoita basa rakakura neiyo Dudziro Meta Tag, asi ini handitende kuti inoita basa rakanaka neiyo Keyword Meta Tag. Izvo zvinongopa ako akasarudzwa Makamu semazwi akakosha epositi yako, kwete anoda kutsanangudza zvakakwana. Iwe unogona kuseta mamwe mazwi akakosha epositi, asi haashandiswe chero kumwe kunhu.
Ndipo panouya zano rangu rinotevera replagin, Yekupedzisira Tag Warrior. Heano maitiro ekuona kuti iwe usanyora kiyi kiyi meta tag uchishandisa iyo All mune Imwe SEO Pack, dzima sarudzo Sarudza Mashandisiro eMETA Mazwi Akakosha:
Iye zvino pese paunonyora blog posvo, ita shuwa yekuzadza iyo Inesarudzo Excerpt munda nemitauro miviri yakapfava iyo inokwezva vamwe vanotsvaga kuti vadzvanye nepositi yako:
Tags: zvose mune rimwechete packchinangwameta tsanangudzometa tagseoyoast seo
Chinyorwa Link Ads Dethrones Google Adsense (pane yangu Blog)
NdiChikunguru 4th: Tsigira Blogging Rusununguko muUnited States
Jul 9, 2007 pa 7: 55 AM
Bvumirana newe nezve kubatanidza ma plugins maviri, Douglas. Ini ndangobva kuisa All In One pane imwe yemasaiti angu uye iri rakakura plugin asi, sekutaura kwako, iro kiyi kiyi chinhu hachisi chikuru. Izvo zvataurwa zvifarirwa neGoogle usaise huremu hwakawandisa pamazwi akakosha uye tarisa pane zita uye rondedzero pachinzvimbo.
Jul 12, 2007 na3: 19 PM
Kutenda neizvi. Zvingasarudzika zvidimbu chimwe chinhu chandakashandisa munguva yakapfuura asi kwete zvine hunyanzvi sezvandaigona. Mazhinji ezvinyorwa zvangu zvinozivikanwa zvakanyanya arikushaya chikamu zvachose.
Ini ndinodzoka ndoita chokwadi chekuti yangu yepamusoro 20 inonyanya kuzivikanwa zvinyorwa zvine chirevo, pamwe nechero zvinyorwa zvitsva zvandinonyora mune ramangwana. Ini ndichave zvakare ndiri kutarisa mune iyo SEO plugin zvakare.
Aug 21, 2007 na1: 52 PM
> Zvinenge zvichinyatsoitika kana vanyori vaviri ava vakaisa misoro yavo pamwe chete vozobatanidza ma plugins maviri kuita rimwe.
Iyo SEO pack inogona kushandisa ma tag kubva ku UTW semazwi akakosha kana iwe ukaisa iyi sarudzo, asi sezvaunokurudzira iwe unogona zvakare kurega UTW inobata meta keywords. Sezvo iwe uchiziva yekupedzisira UTW vhezheni yaive yekupedzisira, nekuti WordPress 2.3 ichave iine yakavakirwa-mukati tag tsigiro. SEO pack ingango tsigira ma tag emazita nekukurumidza, zvese ne UTW uye WordPress 2.3. Kana iwe uine zvimwe zvekuwedzera zvikumbiro zvindiudze.
Sep 14, 2007 na7: 40 PM
Kunge munhu wese ini ndine aya plugins pane yangu blog. Asi vanoita sevanoregererana kunze neimwe nzira. Kutenda nenzira inoshanda yekuita kuti vashande pamwe chete.
SEO Kosi Yekudzidzisa
Dec 16, 2007 pa 10: 06 AM
Pfungwa dzakanaka pane izvi. Meta tag chikamu chakakosha chekumisikidza yakabudirira, uye yekutsvaga injini inoshamwaridzika, kuvapo kwewebhu.
Iko kusetsa kufunga kufunga nezve iyo meta keywords tag. Isu tese zvinoita sekuishandisa. Ndanga ndichigadzirisa mawebhusaiti kweanopfuura makore gumi, kubva kumashure tisati tatoona kuti tanga tichigadzirisa! Nhasi tinoziva kuti makuru enjini haatombo tarise kumaki emazita tag… kana saka isu tinofunga zvakadaro.
Kana zvirizvo, nei tichishandisa meta keyword tag? Kune iwo mashoma mainjini kunze uko ndiani achiri kutarisa iwo mazwi ekukosha? Kukahadzika kunowana traffic yakawanda (kana iripo zvachose). Nemhaka yetsika? Pamwe. Hameno kuti ndichiri kuzvishandisa sei.
Ndeipi pfungwa yako pane izvi?
Dec 16, 2007 pa 10: 44 AM
Meta keywords angangove asina kukosha kune mainjini, asi iwo anogona kugadzirwa otomatiki kubva kumataki ako (ayo anova akakosha kune traffic). Uye meta tsananguro dzinogona kuwedzera yako CTR yakakura nguva.